Fibromyalgia သည်အိပ်မောကျသောညများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒီနေရာတွင်သင့်ကိုကူညီနိုင်သောအကြံပြုချက် (၉) ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
မနေ့ညညမှာညအိပ်ပြီးအိပ်ခဲ့လား fibromyalgia ရှိသူတွေဟာများသောအားဖြင့်အိပ်မောကျနေတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝ၌နာကျင်မှုနှင့်စွမ်းအင်လျော့နည်းခြင်းတို့နှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့အိပ်စက်ခြင်းပိုကောင်းအောင်လုပ်နည်း ၉ ချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Philadelphia ရှိနာမည်ကြီးဂျက်ဖာဆန်ကျန်းမာရေးအိပ်စက်ခြင်းရောဂါကုသရေးဌာနမှပေးပါတယ်။ တကယ်လို့တစ်ယောက်ယောက်ကအိပ်စက်အနားယူနေချိန်မှာအိပ်စက်ခြင်းဟာ fibromyalgia ရဲ့အဓိကလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်မှာအိပ်ရာဝင်နေချိန်မှာတောင်သူအိပ်မောကျနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်။ အများအပြားကသုတေသနလေ့လာမှုများကဒီအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ သိပ္ပံနည်းကျအရ alpha wave disorders ဟုခေါ်သော fibromyalgia ခံစားနေရသောလူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းကိုမရကြကြောင်းထောက်ပြကြသည်။ ဤ ဦး နှောက်လှိုင်းများသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအလွှာများမှနိုးထခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်သည်။
- Fibromyalgia ရှိ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအတွက် အမြန်အကြံပြုချက်များ
အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် fibromyalgia ရှိသောလူများစွာသည် အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကို လျော့ကျစေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဤအချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ညဘက်တွင် ကြွက်သားများ တင်းမာမှုနှင့် နာကျင်မှုကို မြင့်မားစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာအများစုသည် ညဘက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်းအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းများရှိမရှိ ကျွန်ုပ်တို့ထံမေးမြန်းကြသည် - အချို့သောသူများသည် အောက်ပါဆောင်းပါးတွင် သင်ပိုမိုရင်းနှီးလာလိမ့်မည် - သို့သော် အိပ်ရာမဝင်မီ အပန်းဖြေခြင်း၏အရေးပါမှုကို အလေးပေးဖော်ပြလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏ အကြံပေးလေ့ရှိသော အပန်းဖြေကိရိယာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ acupressure ဖျာ (ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ပါ - ဝင်းဒိုးအသစ်တွင် လင့်ခ်ကိုကြည့်ပါ) ကြွက်သားတင်းမာမှုကို ဆန့်ကျင်အသုံးပြုရန်။ အိပ်ယာမဝင်ခင် ၁ နာရီခန့်အလိုတွင် ဖျာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် အသုံးပြုပါ - မိနစ် 1 မှ 20 မိနစ်ခန့် အနားယူပါ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အိပ်ရာမဝင်မီ သင့်ကြွက်သားများနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ လှုပ်ရှားမှုများကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
(ရုပ်ပုံ- acupressure ဖျာ ကောင်းကောင်းအနားယူနိုင်တဲ့ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
Fibromyalgia တွင် နာတာရှည် နာကျင်မှု နှင့် အခြား လက္ခဏာများ ဖြစ်သည့် အိပ်စက်ခြင်း ပြဿနာ နှင့် စိတ်တိုလွယ်သော အူသိမ်အူမ ရောဂါ ကဲ့သို့သော အခြား လက္ခဏာ များ ပါဝင်သည်။ ဤလူနာအုပ်စုတွင် အိပ်စက်ခြင်းပြဿနာသည် အခြားနော်ဝေလူဦးရေထက် သိသိသာသာ ပိုအဖြစ်များကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းသည် ယခင်ရှိပြီးသား လက္ခဏာများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေသည်။
ထို့ကြောင့်အိပ်စက်ခြင်းကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ဤအကြံပြုချက် ၉ ချက်သည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
Fibromyalgia သည်အသံနှင့်အလင်းကိုပိုမိုထိရောက်စွာခံစားရစေသည်။ ထို့ကြောင့် သင်အိပ်မည့်အခန်းတွင် အလင်းရင်းမြစ်မရှိစေရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတွင် တစ်စုံတစ်ဦးမှ သင့်ဓာတ်ပုံအသစ်ကို မှတ်ချက်ပေးသည့်အခါတိုင်း မီးလင်းနေသည့် အလွန်အကျွံ မိုဘိုင်းလ်များကို ဖုံးအုပ်ပေးခြင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ သေးငယ်သော အလင်းရင်းမြစ်များကပင် ပိုမိုကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်ကို လူအများက မေ့လျော့နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အလင်းကို လုံးလုံးလျားလျား မဖြစ်စေသော "blindouts" ကို ရယူရန် ကြိုးစားပါ - သင့်အခန်းရှိ သေးငယ်သော အလင်းရင်းမြစ်များကိုပင် ဖုံးအုပ်ထားရန် သေချာပါစေ။
ရှည်လျားသောနေ့ပြီးနောက်, ကြွက်သားတင်းမာနေဂစ်တာကြိုးကဲ့သို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ လုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကောင်းတွေကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဤဗီဒီယိုတွင် သင့်တွင် လေ့ကျင့်ဖန်တီးထားသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိသည်။ chiropractor အလက်ဇန်းဒါး Andorff. ဒါကြောင့် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေက အိပ်ရာမဝင်ခင် ကြွက်သားနဲ့ အဆစ်တွေကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်ပြီး နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အပန်းဖြေချိန်မစမီ ၎င်းတို့ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပါ။ acupressure ဖျာ (link ကိုပြတင်းပေါက်အသစ်တစ်ခုမှာဖွင့်လှစ်) ။
အိပ်စက်ခြင်းဆရာဝန် (Dr. Doghramiji) ကလည်းညဘက်တွင်မိုဘိုင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်တောက်ပသောမီးများအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်သင့်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အလင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ melatonin အဆင့်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် သဘာဝ circadian စည်းချက်ကို နှောင့်ယှက်သည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်ရာမဝင်မီ နာရီအနည်းငယ်အလိုတွင် မီးမှိန်ထားရန် အကြံပြုထားသည်။ ဤအကြံပြုချက်များကို လိုက်နာခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်တွင် ခက်ခဲနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ပေးစွမ်းနိုင်သည် - ၎င်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုဖြင့် စတင်ရန် အားမနာပါနှင့်၊ ထို့နောက် သင့်ကိုယ်သင် ဖြည်းဖြည်းချင်း တည်ဆောက်ပါ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်သွယ်ရန် ခက်ခဲစေသောကြောင့် အကြံပြုချက်အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် သွားရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုလိုမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ပန်းတိုင်နှင့် လက်တွေ့ကျပါစေ။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များအပါအ ၀ င်သင်တစ်နေ့ချင်းတွင်တစ်ချိန်လုံးအိပ်ရာထမည်ကိုအထူးစိုးရိမ်နေသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက သူက ညတိုင်း တစ်ချိန်တည်းမှာ အိပ်ရာဝင်ဖို့ တင်းကြပ်လွန်းတာမဟုတ်ပေမယ့် ဒါကိုလည်း အကြံပြုထားပါတယ်။ 24 နာရီ circadian ရစ်သမ်နှင့် သင်ထသောအခါတွင် ခန္ဓာကိုယ်သည် အဓိကအားဖြင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု သူကဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံမှန်ထက် သုံးနာရီ နောက်ကျမှထခြင်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်ရန် ခက်ခဲစေသည့် circadian စည်းချက် ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အပန်းဖြေခြင်းကိုတီဗွီ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ တီဗွီကိုကြည့်ပြီးကြည့်ရတာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အိပ်ချိန်မဝင်ခင်နောက်ဆုံးလုပ်သင့်တာမဟုတ်ဘူး။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူက ညနေခင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလျှောက်တာ၊ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖတ်တာ၊ တရားထိုင်တာ၊ အပန်းဖြေတဲ့ တေးဂီတတွေကို နားထောင်ပါ - ဖြစ်နိုင်ရင် ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေဖို့အတွက် ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးပြီး ရေချိုးပေးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ဤသည်မှာ အိပ်ရာဝင်ချိန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဆက်စပ်နိုင်သော လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အသစ်များကို သင်ရရှိစေမည့် အရေးကြီးဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် (အရိပ်အမြွက် - ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ညနေပိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်အကြောင်း ထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါသည်။ acupressure ဖျာ အိပ်ရာမဝင်မီ အနားယူရန်။)
ကောင်းမွန်သောအိပ်ယာနှင့်မွေ့ရာများသည်ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအတွက်အဓိကကျသောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ မွေ့ယာ၊ ခေါင်းအုံးနှင့် ကုတင်များ၏ အရည်အသွေးမှာ ကြီးကြီးမားမား ကွာခြားချက်များ ရှိသော်လည်း ကံမကောင်းစွာဖြင့် ၎င်းသည် အလွန်စျေးကြီးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ကုတင်နှင့်မွေ့ယာဝယ်ရာတွင် ခက်ခဲသောအရာမှာ ကောင်းသောကုတင်ကို မည်ကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းသည်အတွက် လူတိုင်းဖြေရှင်းချက်မရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် မတူညီသော ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အလေးချိန်များဖြင့် ကွဲပြားကြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဤအကျပ်အတည်းအတွက် ကွဲပြားခြားနားသော ဖြေရှင်းနည်းများလည်း ရှိပါသည်။ မွေ့ယာနှင့် ကုတင်များ ရောင်းချသည့် စတိုးဆိုင်သို့ သွားရောက်ရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ အလေးအနက် အကြံပြုလိုပါသည် - ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဤနေရာတွင် စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
ခေါင်းအုံးသည်အစတွင်ပိုမိုတတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်နိုင်သည် - အများစုကအကြံပြုသည် U-shaped လည်ပင်းခေါင်းအုံးဒါပေမယ့် အရသာက အမြဲတမ်းတော့ မတူပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ခဏကြာအောင် စမ်းကြည့်မိတဲ့အထိ သေချာမသိနိုင်ပါဘူး။ အခြားသူများက ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသည့်အရာအပေါ် ကောင်းကျိုးသက်ရောက်သည်ဟု ခံစားရသည်။ တင်ပါးဆုံတွင်း pad (အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ)။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု တင်ပါးဆုံတွင်း ခေါင်းအုံး တင်ပါးဆုံတွင်းနှင့် နောက်ကျောအတွက် ပိုမိုမှန်ကန်သော ergonomic အိပ်အနေအထားကို သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
(အသေးစိတ်ဖတ်ရန် အထက်ဖော်ပြပါပုံကို နှိပ်ပါ။ တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင် - ဝယ်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကြည့်ရှုပါ။)
အကယ်၍ သင်သည်ရှည်လျားသောအိပ်စက်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပါကသင်၏မိသားစုဆရာဝန်မှတစ်ဆင့်အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာမှုအတွက်လွှဲပြောင်းရယူရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ ညဘက်တွင် ပုံမှန်နိုးလာခြင်း၊ နေ့ဘက်တွင် အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ အိပ်နေစဉ် လှုပ်ရှားမှုများစွာနှင့် ဟောက်ခြင်းတို့သည် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ထိုသို့သော အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည် အချို့သောကိစ္စများတွင် အိပ်မပျော်ခြင်းကဲ့သို့သော အရေးပါသောအကြောင်းရင်းများကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ cpap စက်ကဲ့သို့သော အိပ်စက်ခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းနည်းများရှိပါသည်။
ညအိပ်ရာမဝင်မီအစာစားခြင်းကအစာခြေစနစ်တွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် fibromyalgia မကြာခဏအူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ၊ ထို့ကြောင့်အစာအိမ်အက်ဆစ်များတိုးလာသောအခါ၊ အိပ်ရာမဝင်မီအဆီများနှင့်ရောင်ရမ်းသောအစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပုံမှန်ပါပဲ။ ကောင်းသော fibromyalgia အစားအသောက်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အိပ်စက်ခြင်းအတွက် သော့ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်တွေအတွက် ဘယ်လိုအစားအစာကောင်းတွေ ရနိုင်လဲလို့ သိချင်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီအကြောင်းကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာ.
အရက်သည်အိပ်ပျော်ခြင်း၏ပြင်းထန်သောရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းသည် စိတ်ပျက်အားငယ်ဖွယ်ဖြေရှင်းချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် - အမှန်တကယ်မအကြံပြုထားသည့်အရာ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ဝိုင် ဒါမှမဟုတ် ဘီယာ ဖန်ခွက်ပေါင်းများစွာ သောက်တဲ့ညတွေမှာ ပိုကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ သူတွေအကြောင်း ပိုကြားလာရတယ်။ ဒါကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ရှောင်ရမယ်။ အရက်သည် အလွန်ရောင်ရမ်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း နာကျင်မှုကို တိုးလာစေသည့်အပြင် စွဲလမ်းစေပါသည်။ ရောင်ရမ်းမှု ဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိရှိသော သဘာဝဖြည့်စွက်ဆေးများ ဥပမာများ ပါဝင်သည်။ နနွင်း og bilberry ထုတ်ယူ.
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ အထူးကုများအတွက် လိုက်လျောညီထွေ လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည် ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် စာရင်းသွင်းရန် အကြံပြုထားသည့် Youtube ချန်နယ်တစ်ခုရှိသည် - ဒူလာရောဂါဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် မလွယ်ကူကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာ လက်လျှော့ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ရကျိုးနပ်မယ့် နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ၆ ချက်ကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ရောင်ရမ်းခြင်းတုံ့ပြန်မှုများသည် fibromyalgia နှင့်အခြားအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါများတွင်ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ထို့ကြောင့်သကြားနှင့်အရက်ကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းအစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အောက်ပါဆောင်းပါးတွင် fibromyalgia ဓာတ်စာအကြောင်းသင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။
Fibromyalgia သည်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်နာကျင်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပြည့်စုံသောကုသမှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ fibro ရှိသူတွေမှာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ ပိုသုံးရတာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး - ပြီးတော့ ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့သူတွေထက် physiotherapist သို့မဟုတ် chiropractor နဲ့ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဖို့ ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ လူနာအများအပြားသည် ၎င်းတို့အတွက် ကောင်းမွန်သည်ဟု ၎င်းတို့ထင်မြင်သည့် မိမိကိုယ်ကို တိုင်းတာမှုများနှင့် မိမိကိုယ်ကို ကုသခြင်းကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖိသိပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပွိုင့်ဘောလုံးများကို အစပျိုးပေးသည်၊ သို့သော် အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် နှစ်သက်စရာများစွာလည်း ရှိပါသည်။ သင့်ဒေသတွင်း ပံ့ပိုးကူညီမှုအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ရန်လည်း အကြံပြုလိုပါသည် - အောက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
Arnica မုန့် သို့မဟုတ် အပူအေးစက် (အချို့နေရာများတွင် ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်သည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည် နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် အဆစ်အမြစ်နာခြင်းများအတွက် ခေတ်မီအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင်တန်းကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးအားလူမှုရေးမီဒီယာများ (သို့) သင်၏ဘလော့ဂ်မှတဆင့်မျှဝေရန်သင့်အားတောင်းဆိုပါသည် (ဆောင်းပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ) သက်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများလည်းပြုလုပ်သည် (အကယ်၍ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လင့်ခ်လုပ်လိုပါက Facebook တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ) နားလည်ခြင်း၊ အထွေထွေဗဟုသုတနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘဝဆီသို့ ဦး တည်သည့်ပထမဆုံးအဆင့်များဖြစ်သည်။
Option A: FB တွင်တိုက်ရိုက်မျှဝေပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာကိုကူးယူပြီးသင်၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်လည်းကောင်း၊ သင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်သက်ဆိုင်ရာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အုပ်စုတွင်လည်းကောင်းကူးထည့်ပါ။ (သို့) သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်တင်ထားရန်ထပ်မံမျှဝေရန်အောက်ပါ "SHARE" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Option ကို C: လိုက်နာပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာ (ဆန္ဒရှိလျှင်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ) နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ် (ပိုမိုအခမဲ့ဗီဒီယိုများအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ!)
Fibromyalgia နှင့် Gluten: Gluten ပါ ၀ င်သည့်အစားအစာသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုမိုရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါသလား။ ရောင်ရမ်းခြင်း Anti-inflammation Diet: ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသဘာဝကျကျလျှော့ချနည်း